Qanci xaaskaaga agow arrimahan lagu qanciyo
» Qanci xaaskaaga agow arrimahan lagu qanciyo
iska ilow riyadii hore ee ahayd in raaxada sariirtu dheeraato. Raaxada sariirtu ayaa waxa ay ugu fiican tahay 10-ka daqiiqo ee ugu horeeya. Arintana waxa lagu ogaaday baadhitaan cusub oo la sameeyay. Hadaba aqoonyahano maraykan ah oo ka tirsan Sex Theory and Research ayaa waxa ay baadhitaan ku sameeyeen raaxada iyo waqtiga dheer ee ay qaadanayso ee ugu fiican. Waqtigaas oo ay raaxadu noqon karto mid dhib leh oo tartiib u dhacda ama mid dhaqso ah oo jacayl dheer ku jiro.
Dadkii ka qay bqaadanayay baadhitaanka ee la waydiiyay su’aal ahayd intee oo daqiiqo ayay qaadataa galmada ugu fiican, ayaa waxa ay ku jawaabeen in ayna noqon mid waqti dheer qaadata. Baadhitaankaasina waxa ku cadaatay in galmada ugu fiicanina ay qaadato 10 daqiiqo.
Galmada qaadata hal ilaa laba daqiiqo waxa ay u arkeen mid gaaban, halka 2 ilaa 7 daqiiqana loo arkay mid caadi ah. Hadii ay galmadu qaadata in ka badan 13 daqiiqo ayaa waxa ay tahay mid dheer. Laakiin marka uu raaxaysigu ku dhamaado ilaa iyo 10 daqiiqo ayaa ah tan ugu fiican.
Saynab Adan Ali
Anonymous11/16/2010naagtaada si fiican u qanci foorar ugu tag futada iska ilaali, si daran u dhuuq naasaheedaReplyDeleteAdd commentLoad more...